IR35 नियम र यसको फ्रन्चाइजीहरूमा प्रभाव Franchiseek
»IR35 नियम र फ्रेंचाइजी मा यसको प्रभाव
IR35 बेलायतको बजारमा फोर्स गर्न आउँदैछ र यसको फ्रन्चाइजीहरूमा प्रभाव
IR35 बेलायत मा एक कर कानून हो; यो एक कर कानून हो जुन रोजगारीसँग मिल्दो दरमा 'प्रजाति रोजगार' लाई कर लगाउन डिजाइन गरिएको हो। IR35 ले मध्यस्थ मार्फत कामका लागि भुक्तानी प्राप्त गर्ने कामदारहरूलाई सम्बोधन गर्दछ, उदाहरणका लागि, उनीहरूको सीमित कम्पनी, र जसको ग्राहकसँगको अन्तर्क्रिया एक हो कि यदि उनीहरूले सिधै भुक्तानी गरेको भए, तिनीहरू ग्राहकको कर्मचारीको रूपमा लिइने थिए। यस लेखमा, हामी फ्रान्चाइजीमा यी नियमहरूको प्रभाव विचार गर्दैछौं? IR35 नियमहरु लाई असर गर्दछ फ्रेंचाइज? के फ्रान्चाइजीहरू प्रवर्तित कर्मचारीको रूपमा काम गर्दैछ? मलाई ध्यानपूर्वक पछ्याउनुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्।
के IR35 नियम हासिल गर्नु हो
संक्षिप्तमा, विचार गरौं IR35 नियमहरू के हासिल गर्ने लक्ष्य राख्दछन्; यो सरल छ; आईआर standards35 मापदण्डको उद्देश्य एउटा व्यवसायको उपयोग गरेर कर भुक्तानीबाट भाग्ने व्यवसाय परिचालनहरूलाई घटाएर करको आवक बढाउनु हो। यी नियमहरूले सुनिश्चित गर्दछ कि श्रमिकहरू सही रूपमा रोजगारी वा स्वरोजगारको रूपमा वर्गीकृत छन् र रोजगार करको सही रकम तिर्दछन्।
फ्रन्चाइज व्यापार मोडेल
फ्रान्चाइजी व्यवसाय मोडेलले कसरी काम गर्छ भनेर बुझ्नको लागि एक कदम पछाडि हेरौं। फ्रन्चाइजी अपरेशनमा, फ्रन्चाइजर भनेर चिनिने मूल व्यवसायको मालिक, मुख्यतया फ्रान्चाइजी भनिने एक उद्यमीलाई उसको ब्रान्ड प्रयोग गर्ने अधिकार बेच्छ। फ्रान्चाइजरले फ्रन्चाइजीलाई व्यवसाय समर्थन, मार्केटि,, र वित्तिय प्राप्त जस्ता क्षेत्रमा निरन्तर समर्थन प्रदान गर्दछ। बदलामा, फ्रान्चाइजी फ्रन्चाइजरको व्यवसाय मोडेल अनुसरण गर्न र इकाई बिक्रीको प्रतिशतको आधारमा फ्रान्चाइजर रोयल्टी भुक्तान गर्न सहमत गर्दछ।
IR35 कर कानून फ्रान्चाइज व्यवसाय को लागी के हो?
यो आईआर complicated35 जटिल छ, तर फ्रान्चाइजी व्यवसाय आईआर whether35 भित्र छ कि छैन भनेर निर्धारण गर्न यसलाई सुधार्ने उत्तम तरिका यस प्रश्नको उत्तर दिने हो; फ्रेंचाइजीहरू कम्पनी वा ब्रान्चाइजर द्वारा ब्रान्डका कर्मचारीहरू मानिन्छन्? यदि तिनीहरू कर्मचारीहरू छैनन् भने तिनीहरू IR35 नियम बाहिर छन् र रोजगार कर तिर्ने आवश्यक छैन।
कसरी IR35 नियम फ्रैंचाइजी प्रभाव हुनेछ? के सम्पूर्ण फ्रान्चाइजी IR35 द्वारा समात्ने छ वा यो व्यक्तिगत फ्रान्चाइजीको आधारमा हो?
यस महत्त्वपूर्ण प्रश्नको जवाफ व्यवसायको विशेष संरचनामा निर्भर गर्दछ। जब IR35 नियमहरू र फ्रेंचाइजी व्यवसायहरू विचार गर्दा, केहिको लागि, फ्रान्चाइजीलाई त्यसपछि सामान / सेवाहरूको लागि फ्रन्चाइजरले भुक्तान गरिन्छ; यस प्रकारको मोडेलमा, IR35 नियमहरू लागू हुन्छन्, यो स्वचालित रूपमा प्रवासी रोजगारीमा परिणत हुन्छ।
यदि, कुनै कारणका लागि, एक फ्रान्चाइजरले सामान र सेवाहरू प्रदान गर्न फ्रन्चाइजी तिर्नु पर्छ, जो कम विरलै हुन्छ भने, त्यसोभए, वास्तवमा, छुट्टा रोजगार। यस अपरेशनको मोडमा पर्ने फ्रन्चाइज व्यवसायहरूले निम्न विचार गरेर नयाँ IR35 परिवर्तनहरूको लागि तयारी गर्न सक्छ:
एउटा कम्पनीलाई सानो कम्पनीको रूपमा वर्गीकृत गरिनेछ र आईआर rules outside नियम बाहिर यो तीनवटा मापदण्ड मध्ये कम्तिमा दुई पूरा गर्दछ भने:
१०.२m भन्दा बढीको कारोबार
एक शेष रकम कुल £ 5.1m भन्दा अधिक छैन
50० भन्दा बढी फ्रन्चाइजीहरू पनि छैनन् जुन कम्पनीले भुक्तान गर्ने कर्मचारीको रूपमा लिइन्छ।
त्यसो भए कसरी यस संरचना र मोडेल अन्तर्गत सञ्चालन हुने फ्रान्चाइजी व्यवसायहरूले नयाँ IR35 नियमहरूको लागि तयारी गर्न सक्दछन्?
तल IR35 कर परिवर्तनहरूको लागि तयार गर्न केही सुझावहरू छन्:
यस IR35 कर परिवर्तनको लागि तयारी गर्नु आवश्यक छ किनकि त्यहाँ परिणामहरू छन् यदि HMRC कम्पनीको मूल्यांकनमा असहमत भए; यो कुनै सीधा प्रक्रिया होईन र जटिल 'रोजगार स्थिति' विचारहरू समावेश गर्न सक्दछ। तपाइँलाई मद्दत गर्न मद्दत गर्नका लागि केहि सुझावहरूमा एक नजर लिनुहोस्
कर्मचारी को रूप मा मानिन्छ फ्रेंचाइजीहरु को लागी एक लेखा परीक्षा आयोजित
यी परिवर्तनहरूका लागि तयारीमा, कर्मचारीहरू वा फ्रान्चाइजीहरूको लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक हुन्छ जुन फ्रान्चाइजरले तिर्दछ। तपाईं प्रश्नहरूको जवाफ दिन सक्षम हुनुपर्दछ:
तपाईंको कम्पनी भित्र कति वटा फ्रन्चाइजीहरू काम गर्छन्?
तपाईंको व्यवसायमा उनीहरूको महत्त्व वा योगदान के हो?
व्यवसाय / सेवाका कुन अंशहरू तपाईंले फ्रान्चाइजीहरू तिर्दै हुनुहुन्छ?
को भित्र छ वा बाहिर नयाँ नियमहरु?
अर्को कुरा गर्न को लागी फ्रन्चाइजीहरु नयाँ बाहिर IR35 नियमहरु को 'बाहिर' वा 'भित्र' खस्छन् भनेर निर्धारण गर्नु हो। यसलाई प्राप्त गर्ने उत्तम तरीका भनेको व्यक्तिगत रूपमा फ्रान्चाइजीहरू मूल्या assess्कन गर्नु हो। रोजगार भूमिको प्रयोजनका लागि त्यस्तो भूमिकालाई सही रूपमा वर्गीकृत गर्न उचित हेरचाह प्रदर्शन गर्न असफल भएमा गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्दछ। करको लागि सरकारको रोजगार रोजगार स्थिति (CEST) क्यालकुलेटरले IR35 कार्य नियमहरू लागू गर्दछ कि हुँदैन भनेर निर्धारण गर्न मद्दत गर्दछ।
फ्रन्चाइजीहरु संग कुराकानी
तपाईंको फ्रन्चाइजीहरूसँग नियमित रूपमा कुराकानी गर्न यो आवश्यक छ। तिनीहरू उचित आईआर policies policies नीति र प्रक्रियाहरूमा रहेको कम्पनीसँग साझेदारी जारी राख्न सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ; खुला र पारदर्शी भएकोले तपाईंलाई उत्तम स्वतन्त्र प्रतिभालाई आकर्षित गर्न जारी राख्नको लागि मद्दत गर्दछ।
फ्रेंचाइजी व्यवसायहरू सामान्यतया IR35 नियम बाहिर छन् तर माथि उल्लेख गरिएको अद्भुत मामलाको लागि जहाँ फ्रान्चाइजीहरू सामान र सेवाहरूको लागि फ्रान्चाइजी दिन्छन्। त्यो अवस्थामा, फ्रन्चाइजी फ्रन्चाइजरका कर्मचारीहरू हुनेछन्, र IR35 नियमहरू लागू हुनेछन्।
IR35 नियमहरूको उल्ल with्घनको साथ आउने मोटा जुर्मानाबाट बच्नको लागि तयारी गर्न समय लिनु नै यदि तपाईं फ्रान्चाइजी व्यवसायको मालिक हुनुहुन्छ भने उत्तम शर्त हो।
यदि तपाईं यस लेखका लेखक जुली प्रोभिनोसँग सम्पर्कमा रहन चाहानुहुन्छ, जसले व्यवसाय पनि चलाउँछन्, एचएचआरएचआर भने, कृपया यहाँ क्लिक गर्नुहोस् उसलाई ईमेल गर्न।
DNS लेखाकार फ्रन्चाइज DNS लेखाकार फ्रन्चाइज र आफ्नो प्रमाणित अवसर संग तपाईंको आफ्नै व्यवसाय संग तपाईंको भविष्य निर्माण। संग ...
VR सिमुलेटरहरूको बारेमा VR सिमुलेटरहरू २०१ 2017 मा स्थापना भयो र युरोपको पहिलो DD रेसि center सेन्टरको रूपमा स्थापित भयो जुनको प्रमुख शक्तिको साथ ...
काल्पनिक सेवाहरु जोड्नुहोस् र आफ्नो मनपर्ने को क्षेत्र मा एक घर रखरखाव व्यापार शुरू Fantastic Services एक ग्लोबल कम्पनी हो,…
हट डग एकेडेमी। एशियाई फ्रन्चाइज एकेडेमीको पूर्ण स्वामित्वको सहायक कम्पनीको रूपमा, हट डग एकेडेमी इरादाको परिणाम हो ...
"आज हामीले १ homes घरहरू सफा गर्यौं, YET ले कहिल्यै हाम्रो घर छोड्दैन!" कल्पना गर्नुहोस् आफैँमा घरेलु सफा गर्ने फ्रान्चाइजी छ, कल्पना गर्नुहोस् आफैमा प्रति £ ££,००० कमाउने…
बेलायतको अग्रणी बच्चाको कम्प्युटिfफ्रान्चाइजीमा सम्मिलित हुनुहोस् भविष्यको लागि बच्चाहरूलाई तयार पार्नुहोस् रमाईलो र रमाईलो टेक क्लबहरू हामी प्रदान गर्दछौं ...